News - Zouping Mingxing Chemical ayaa horay ugu sii socota warshadda kiimikada dhijitaalka ah
Khadka wax soo saarka otomaatiga ah ee hortayada ka socda ayaa ah khadka wax soo saarka caqliga ee la casriyeeyay oo loo beddelay Zouping Mingxing Chemical Co., Ltd. oo leh maalgashi 100 milyan yuan ah sannadkan. Waqtigan xaadirka ah, alaabada kiimikada waxaa loo soo saaray wax soo saar dufcado ah. Sida laga soo xigtay maamulaha guud ee shirkadda, "imtixaanka weyn" ee xaaladda cudurka faafa, shirkaddu waxay si guul leh "u qaadatay imtixaanka" iyada oo ku tiirsan hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda, iyo khadka wax soo saarka caqliga ayaa sidoo kale keenay fikrado cusub oo ku aaddan horumarinta shirkadaha. Sannadkan, shirkaddu waxay diiradda saari doontaa horumarinta alaabooyin cusub oo leh tiknoolojiyad sare iyo qiimo sare oo lagu daray, waxayna ku dadaalaysaa inay dhisto saldhig heer caalami ah oo heer caalami ah.
Waxaa saameeyay xaalada faafa, ma fududa in la gaaro himiladaas oo kale, laakiin hogaamiyaasha shirkadu kalsooni buuxda ayey ku qabaan: “iyadoo la raacayo hagida sirdoonka warshadaha, dardar galinta isbadalka iyo casriyeynta, iyo kor u qaadida isbadalka shirkada ee soo jireenka ah wax soo saar si wax soo saar qiimo sare leh. "
Marka lagu daro xawaareynta isbeddelka khadka weyn, Zouping Mingxing Chemical Co., Ltd. waxay sidoo kale xawaareyneysaa socodkeeda dhanka warshad kiimiko dijital ah. Waxay qorsheyneysaa in lagu xaqiijiyo howlgalka makaanikada caqliga leh ee ka imanaya dufanka alaabta ceyriinka ah iyo miisaamidda alaab soo qabashada, isugeynta iyo ogaanshaha cilladda. "Sidan oo kale, tirada shaqaalaha la isticmaalay waxaa lagu yareeyay 32%, laakiin waxtarka wax soosaarka aqoon isweydaarsiga ayaa ka badan labanlaab."
Haddii aan dooneyno inaan ku guuleysano suuqa gudaha, waa inaan adduunka u baxno. Waqtigan xaadirka ah, Zouping Mingxing Chemical Co., Ltd. waxay xawaareyneysaa boodboodka "wax soo saarka u janjeedha wax soo saarka" illaa "wax soo saarka ku jiheysan adeegga", iyada oo sii kordhinaysa faa'iidooyinka kala duwanaanta iyo kordhinta saamigeeda suuqa. Saddexdii bilood ee ugu horreysay sanadkan, isku darka US $ 30 milyan oo ka mid ah lacagaha qalaad ayaa laga soo saaray dhoofinta, iyadoo kororka sanad-sannadeedka uu ahaa 30%. Waxaan ku dadaali doonaa inaan kasbano 100 milyan oo doolarka Mareykanka ah dhoofinta sanadka oo dhan.